Axmed Madoobe "Qatar ha joojiso lacagta ay bixineyso ee dhibaatada ku ah dalka" - Jowhar Somali news Leader
Home News Axmed Madoobe “Qatar ha joojiso lacagta ay bixineyso ee dhibaatada ku ah...
Axmed Madoobe “Qatar ha joojiso lacagta ay bixineyso ee dhibaatada ku ah dalka”
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ka hadlayay furitaanka Kalfadhiga Labaad ee Baarlamaanka Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa fariin culus u diray dowladdaha Qatar, Turkiga iyo Itoobiya oo taageero dhow siiya Villa Somalia.
Waxa uu sheegay in lacagaha ay Qatar ku soo daad gureyneyso dowladda uu dhibaato ku yahay dalka, Turkiga ayuu isaguna uga digay inuu dib u eegis ku sameeyo si faha loo adeegsado askarta ay tababaraan, iyadoo Itoobiyana uu u diray fariin ah iney la socdaan dhaqan xumada Saraakiishooda.
“Qatar waxaa leenahay Lacagta bixineyso jooji oo dhibaatada dalka ku ah, Turkey ciidanka tababareyso jooji dowlad wax lagu aamino ma joogto, Itoobiya waxaa leenahay Saraakiishada dhaqanka xun ee socsocota jooji” ayuu yiri madaxweyne Axmed Madoobe.
Axmed Madoobe oo dhinacyo badan khudbadiisa ku soo qaatay ayaa dhanka kale muujiyay sida uu mar kasta diyaarka ugu yahay in tabashooyinka jira lagu dhameeyo miiska wadahadalka, isagoo ka digay hadii taa la diido ay siyaabooyin kale u tashan doonaan.
“Madaxweyne Farmaajo Madaxweynahaygii baa tahay kaalay aan wada hadalno miiska aan wada fariisano dastuurku wixii ku siiyo qaado wixii uu aniga ii ogal yahayna isii, haddii intaas la waayo cid nakala xukunta raadineynaa haddii la waayo dadka siyaabo kale u tashan doonaan” ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxweyne Axmed Madoobe.
Khilaafka Jubaland iyo dowladda dhexe ayaa marba marka ka sii danbeysa sii xoogeysnaya, iyadoo uu ka dhashay dib u doorashada madaxweyne Axmed Madoobe bishii August ee sanadkii hore, waxaana wali taagan cadaadiska ay dowladda ku heyso maamulka Jubaland.